आजको राशिफलमा के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा ? – Page 7963 – Pahilo Page
आजको राशिफलमा के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा ?
११ कार्तिक २०७५, आईतवार ०९:५५ 621 पटक हेरिएको
वि.सं. २०७५ साल कात्तिक ११ गते। आइतबार। इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर २८ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ कौलागा। कार्तिक कृष्णपक्ष। तिथि– चतुर्थी, १८:२० बजेउप्रान्त पञ्चमी।
नियमित काममा जुट्दाजुट्दै पनि केही कमजोरी देखा पर्नेछन्। आलोचकहरूबाट केही सजग रहनुहोला। मौकामा प्रयत्न गर्दा काम बन्नेछ। सोखले खर्च बढाए पनि मालमत्ता जोड्ने समय छ। आर्थिक कारोबारतर्फ लिन मिले पनि आज बाहिरिएको धन फिर्ता आउन मुस्किल पर्नेछ। विवादास्पद समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
पहिलेको श्रम र लगानीबाट फाइदा उठाउने समय छ। आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् भने पछिका लागि रकम सञ्चय गर्ने मौका छ। व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने समय छ। प्रयत्न गर्दा जिन्सीलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। समाजसेवा र नोकरीतर्फ गरिएका कामको राम्रै मूल्यांकन हुनेछ। आम्दानी बढ्नाले आवश्यकता र सोख पूरा गर्न सकिनेछ।
विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि नैतिक मर्यादा पालना गर्दै प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने समय छ। स्वार्थका लागि साइनो गाँस्नेहरू पछि हट्नेछन्। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। चिन्तन, अध्ययन र लेखनतर्फ रुचि जाग्नेछ। लगनशीलताले कर्मसिद्धि हुनेछ।
सानो प्रयत्नले कीर्तिमानी कामको यश लिने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। आम्दानी थोरै भए पनि आवश्यकता पूरा हुनेछ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् भने भविष्यका लागि कर्मसञ्चय गर्ने समय छ। सामाजिक कामले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। मिहिनेतको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। आध्यात्मिक चेतनाले धर्मकर्म र सेवामूलक काममा प्रवृत्त गराउनेछ। (नेपाली पात्रो)
आजको राशिफलमा के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा ? [२०७५ मंसिर ३ गते]
आजको राशिफलमा के लेखेको छ तपाईको भाग्यमा ? [२०७५ कार्तिक १४ गते]
तपाईंको राशिफलमा के लेखेको छ आज ? २०७५ कार्तिक १३ गते
राशिफलमा आज २०७५ कार्तिक ८ गते के छ तपाईंको भाग्यमा ?
आजको राशिफल, के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा ?
यौनइच्छा बढाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसो भए खानुहोस् यी ८ तरकारी
कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गर्यो प्रदेश योजना आयोग
विकासले गति लिन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री आफैले पोखे असन्तुष्टि
यसो भनेछन् गृहमन्त्री बादलले फ्रान्सका राजदूत लेजेसँग
प्रकाश दाहालको प्रथम स्मृतिसभामा के बोले प्रधानमन्त्री ओली ?
एउटा मान्छे जिउँदै छ मनमा
पाल्पामा जीप दुर्घटना : एकजनाको मृत्यु, ७ जना घाइते